I-14 / 11 / 2019 | RayHaber
Usuku: 14 November 2019
Ukusungulwa kwe-Adapazarı High-Speed ​​Speed ​​Factory; zonke izinhlobo Electric Sesitimela Series kanye Urban Rail eTurkey ngaphandle ubuchwepheshe ukwenza ukukhiqizwa ngesivinini isivinini sesitimela okusezingeni eliphezulu isitimela amasethi kanye nabaqeqeshi nge Ezokuthutha Izimoto [Okuningi ...]
14 / 11 / 2019 Ray News
Ngokokuqala ngqa ezweni lethu kumaphrojekthi wesitimela, ngaphakathi kohlelo lwe-TUBITAK 1007, ukuze izwe libe nezinhlelo zokusayina ezitholwe phesheya; I-National Railway Signalization Project (UDSP) ngokubambisana ne-TCDD, TÜBİTAK BİLGEM kanye ne-İTÜ [Okuningi ...]
Umkhakha wezimpahla uthande ukwenziwa kwedijithali. Abaqalayo abaningi, ababona izidingo, bangena emkhakheni futhi bathwala umsebenzi wezandla nowamaphepha wedijithali. Ukuqalisa kunikela ngezinsizakalo ezingakenziwa okunikelwe ezokuthutha, nezidijithali [Okuningi ...]
I-4.International Travelexpo Tourism and Travel Fair Held e-Ankara; I-CD TCDD ibambe iqhaza kwiTravelation Tourism Fair Travel 4 eTravelexpo International Tourism and Travel Exhibition ATO Congresium e14 kulo nyaka [Okuningi ...]
Amabhentshi abekwa eSoft Stops Akhiwa kuSalim Dervişoğlu Street; UMasipala waseKocaeli Metropolitan, izindawo eziluhlaza njenge-promenade, ipaki kanye nengadi, kanye nemishini yasemadolobheni edingekayo enkabeni yedolobha [Okuningi ...]
Isiteshi sicindezelwe e-Istanbul; Inkinobho icindezelwe kuphrojekthi yeChannel Istanbul, ezotholwa ngemodeli yokwakha-esebenza, ebiza u-75 wamaphawundi ezigidi. Inqubo yephrojekthi yeKanal Istanbul iyashesha. Imvume futhi inamathiselwe eMnyangweni Wezemvelo kanye Namadolobha [Okuningi ...]